यस्तो छ सेलिब्रेटी दशैँको योजना - हिमाल दर्पण
यस्तो छ सेलिब्रेटी दशैँको योजना
by Himal Darpan ५ दिन अघि0Comment
बडा दसैँ नेपालीको घर आँगनमा प्रवेश गरिसकेको छ । अघिल्लाका बर्ष झै यसपालि पनि कोरोना संक्रमणको त्रास कायमै रहेकाले स्थिति त्यत्ति सहज भइसकेको छैन । यद्यपि, परम्परालाई निरन्तरता दिँदै चाडपर्व भने सबैले मनाउने गरेका छन् । चाडबाड मनाउन सर्वसाधारणले झै सेलिब्रेटीले विशेष योजना बनाउँने गरेका छन् । सेलिब्रेटीहरूलाई यसवर्षको दसैँलाई कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ ? भनेर प्रश्न गरेका छाैँ । हेरौं उनीहरूको जवाफ :–
प्रायः दसैँमा म देशबाहिर नै हुन्छु । दिदीबहिनी अमेरिकामा भएकाले यसपालि पनि उतै जाने योजना बनाएको छु । टीकाको दिन मेरो आमाको श्राद्ध पर्छ । त्यसैले म भोलिपल्ट मात्र टीका लगाउँछु । अमेरिका गइनँ भने नेपालमै बसेर साथीभाइ भेटघाट गरी रमाइलोसँग दसैँ मनाउँछु र ससुराली पनि जान्छु । चाडपर्वको नाममा जुवातास खेल्ने र अरूको देखासिखी गर्ने प्रवृत्ति छ । यसो गर्नु ठीक होइन ।
यसपालि दसैँमा अमेरिका, क्यानडा अस्ट्रेलियालगायत देशबाट विभिन्न कार्यक्रमका लागि निम्ता आएका छन् । तर, संगीत नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको काम भएकाले जान पाइँदैन होला । यसपालि देशमा ठूलो संकट आएको छ । त्यसैले बाढीपहिरोपीडित जनतालाई राहत लिएर जाने र दसँैमा उतै बस्ने योजना बनाएको छु । घरमा भने टीका लगाउन मात्र आउँछु ।
दसैँसँगै चुनाव पनि नजिकिँदै गरेको हुँदा जिल्लातिरकै कार्यक्रममा व्यस्त हुन्छु । परिवारसँग बसेर रमाइलो गर्ने, साथीभाइ, इष्टमित्रलाई शुभकामना आदानप्रदान गर्ने त छँदै छ । यसपालि मेरो मामा स्वर्गीय हुनुभएकाले मामाघर जाने कार्यक्रम छैन । त्यसैले काठमाडौंमै बसेर रमाइलो गर्नेछु ।
बाढीपहिरोपीडितको राहत र उद्धारमा खटिरहेकै छु । अहिलेसम्म दसैँबारे केही सोच्न पनि पाएको छैन । बाढीग्रस्त क्षेत्रमा नमुना बस्ती निर्माण गर्ने घोषणा गरिसकेको छु । त्यसैले यसपालिको दसैँ त्यतै हुन्छ जस्तो लागेको छ । काठमाडौंमै भए पनि विगतको जस्तै गरी दसैँ मान्ने योजना छैन ।
यसपालि दसैँको फूलपातीमा छक्कापन्जा– २ रिलिज हुँदै छ । त्यसैले मेरो दसैँ त्यसैमा बित्छ । यसपालि दसैँको टीकाको दिन सम्पूर्ण हलहरूमा गएर दर्शकको हातबाट टीका लगाउने योजना बनाएकी छु । फिल्म रिलिज हुने भएकाले यो एउटा ठूलो उत्सव हो । यसमै रमाउँदै दसैँ मनाउने योजना छ ।
दसैँमा त्यस्तो खासै योजना त छैन । तर, रमाइलो गर्नुपर्छ भन्नेचाहिँ लागेको छ । दसँैमा सबैजनाको फुर्सद हुने भएकाले परिवारसँग दिल्लीतर्फ घुम्न जाने योजना बनाएको छु । तर, दसँैको टीका लगाउन भने घर आउनेछु । मेरो मामाघर दामन हो । त्यसैले दसैँको अवसर पारेर त्यता पनि जाने योजना छ ।
शिवहरि नेपाल, हास्यकलाकार
मेरो यसपालि दसैँमा खासै योजना छैन । विगतभैmँ परिवारसँग मिलेर दसैँ मान्ने हो । तर, म अस्पतालमा काम गर्ने भएकाले आफ्नो कामलाई पनि निरन्तरता दिन्छु । दसैँमा विदेशबाट कार्यक्रमको अफर आयो भने त्यतातिर पनि जाने योजना छ । नत्र आफ्नो ससुराली र मामाघर गइन्छ, आफ्नै परिवारसँग रमाइन्छ ।
‘छक्कापन्जा २’मा मैले पनि अभिनय गरेकी छु । त्यो फूलपातीको दिन नै रिलिज हुँदै छ । त्यसैले ‘छक्कापन्जा–२’कै रिलिज र प्रवद्र्धनमा व्यस्त हुनेछु । तर, दसैँको टीका थाप्न अग्रजहरूकहाँ पनि जाने योजना छ । यसबाहेक अरू योजना बनिसकेको छैन । नयाँ पत्रकिाले छापेको छ ।
यसपालि पनि दसैँ विगतको जसरी नै मनाउँछु होला । त्यसैले खासै विशेष योजना बनाएको छैन । दसैँलगत्तै महसञ्चारले एउटा चलचित्र बनाउँदै छ । त्यसको स्क्रिप्ट र अरू पक्षमा काम हुँदै छ । दसैँमा पनि त्यसको तयारीमा व्यस्त हुन्छु । तर, आफन्त भेटघाट गर्न र साथीभाइसँग रमाइलो गर्न कहाँ बिर्सन्छौँ र रु
दसैँकै लागि भनेर खासै योजना बनाएको छैन । यसपालि दसैँलगत्तै हाम्रो गेम छ । दसैँमा चार दिन मात्र घरमा रहन्छु । यो अवधिमा पनि परिवारसँगै चाड मनाउने हो । अरू विशेष काम केही गर्दिनँ होला । विगतका वर्षमा जस्तै यसपालि पनि ससुराली र मामाघर जाने योजना त छँदै छ । ट्रेनिङ चलिरहेको छ । धेरैजसो त गेमकै मुडमा हुन्छु होला ।
यसपालि विदेशबाट धेरै कार्यक्रमका लागि निम्तो आएको थियो । तर, परिवारले चाडबाडको वेलामा बाहिर जान दिएन । नेपालकै विभिन्न कार्यक्रममा व्यस्त हुन्छु । ११ गते फूलपातीको दिन कार्यक्रम छ, सो कार्यक्रम सकेर स्याङ्जास्थित घर जान्छु । घर गएपछि साथीभाइ भेट्ने, रमाइलो गर्ने हो । मामाघर र ससुराली पनि गइन्छ ।
विमल घर्तीमगर, फुटबलर
दसैँको मुखमा खेलबाट ब्रेक पनि मिलेको छ । त्यसैले दसैँ मनाउन नवलपरासी घरमा जान्छु । दसैँको वेलामा आफ्ना साथीभाइ भेट हुन्छ । त्यसैले परिवार र साथीभाइहरूसँग रमाइलो गरेर दसैँ मनाउनेछु । अरू त खासै केही
योजना छैन ।
गोकर्ण विष्ट, एमाले नेता
दसैँमा केही समयका लागि गुल्मी जान्छु । दसैँकै लागि कुनै योजना त बनाएको छैन । तर, यसपालिको दसैँ जनताका बीचमा गएर मान्ने सोचाइ छ । चुनाव पनि नजिकिँदै गरेकाले राजनीतिक–सांगठनिक काम गर्दै जनताको बीचमा रहन्छु । पहिलापहिला ससुराली र मामाघर जान्थेँ, तर यसपालि त्यता जान्नँ होला ।
यसपालि धादिङको गाउँ जाने योजना बनाएको छु । तर, बाटोले गर्दा जान पाइएलाजस्तो छैन । गत वर्ष पनि टीका लगाइएन । यसपालिचाहिँ टीका लगाउने सोचेको छु । यदि बाटो राम्रो भयो भने गाउँ जान्छु । गाउँ गएँ भने साथीभाइ र परिवारसँग रमाइलो गरी दसैँ
मनाउने हो ।
देवीराम पराजुली, हास्यकलाकार
यसपालि दसैँमा परिवारसँग कतै घुम्न जाने कि भन्ने सोच छ । गइएन भने घरमै बसेर परिवारसँग दसैँ मनाइन्छ । टीका थाप्न ससुराली कोटेश्वर र मामाघर सिन्धुपाल्चोक जान्छु होला । दसैँ हामी हिन्दूहरूको महान् पर्व हो । यसलाई धेरैजसोले देखावटी रूपमा चुरीफुरीका साथ मनाउने गर्छन् । घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ भन्ने उखानलाई बिर्सनुहुँदैन । साथै, सभ्य ढंगले संस्कृतिको जगेर्ना गर्नुपर्छ ।
यसपालि बिरामी भएको हुनाले खासै विशेष योजना बनाएको छैन । मेरो घर चितवन हो, तर त्यता जान्नँ । काठमाडौंमै आराम गरेर बिताउनेछु । माछामासु खाने सोच पनि छैन । विजयादशमीको दिन टीका लगाउँछु । अरू ठाउँमा टीका लगाउन जाँदिनँ होला ।
सुनील पोखरेल, रंगकर्मी
यसपालि मैले दसैँको वेलामा त्रिशूली अथवा गोसाइँकुण्ड जाने सुरसार कस्दै छु । टुंगो भने लाग्न बाँकी छ । कतै गइएन भने घरमै बस्छु । लाइब्रेरीमा थुपै्र पुस्तक पढ्न बाँकी छन् । तिनै पुस्तक सक्ने योजना बनाएको छु । तर, विजयादशमीको टीका लगाउन आफ्ना आफन्तकहाँ भने जान्छु ।
श्रवण मुकारुङ, कवि
यसपालि दसैँमा भोजपुर घर जाने इच्छा छ । दसैँको फूलपातीको एक–दुई दिनअघि जान्छु । अरू त खासै योजना छैन । गाउँमा गएर अलिअलि लेख्ने सोच बनाएको छु । टीका थाप्न मामाघर खोटाङ पनि जान्छु होला । अरू बाँकी त सामान्य हो, खानपिन चलिहाल्छ ।
उपेन्द्र सुब्बा, कवि
दसैँमा रारा, मुगु घुम्न जाँदै छु । धेरै अघिदेखिको सपना हो, त्यहाँ पुग्ने । त्यसका लागि असोज ८ गते हिँड्छौँ होला । दसैँ त्यतै रारा, मुगुतिर नै मनाइन्छ । साथीहरूसँगै जाने हुनाले रमाइलो पक्कै हुनेछ । हेरौँ त्यसपछि केके हुन्छ ।
दसैँको खासै योजना छैन । गाउँ सुर्खेत जाने योजना थियो, तर घरायसी समस्याका कारण त्यतातर्फ पनि जान नपाइने भयो । मैले जिम्मा लिएका कतिपय काम अपूरा नै छन् । तिनै कामलाई पूरा गर्ने, फिल्म हेर्ने, किताब पढ्ने गर्छु होला । दसैँको वेलामा अरू समयभन्दा शान्त भएर रहने विचारमा छु ।
यसपालि दसैँमा नयाँनौलो केही छैन । दसैँको सुरुवातमा नै फिल्म ‘छक्कापन्जा
२’ रिलिज हुने भएकाले हलहरूमा गएर दर्शकसँगै फिल्म हेर्ने हो । अरू समय भनेको आफ्नो परिवारसँग रमाइलो तरिकाले दसैँ मनाउने र ससुराली मामाघर जाने योजना बनाएको छु ।
डा. मीनेन्द्र रिजाल, कांग्रेस नेता
त्यस्तो खासै योजना छैन । निर्वाचन नजिकिँदै छ । त्यसैले धेरैजसो त्यतैतिर ध्यान केन्द्रित भएको छ । जसले गर्दा यसपालि दसैँमा विराटनगर जाने योजना छ । त्यहाँ गएर निर्वाचनको तयारी गर्ने र आफ्ना परिवार आफन्तलाई भेट्ने योजना बनाएको छु । अरू त त्यस्तो विशेष योजना छैन ।
खासै योजना छैन । गाउँ सिन्धुली खुर्कोट जाने योजना छ । कहिले जान्छु भन्ने तय भएको छैन । वास्तवमा भन्ने हो भने म योजना बनाएर हिँड्ने मान्छे होइन । त्यसैले
परिवारसँग बसेर रमाइलोसँग दशैं मान्ने योजना छ ।
बिमाकुमारी दुरा, लोकगायिका
फुलपातीको दिन लमजुङको एउटा गाउँमा कार्यक्रम छ, त्यतै जाने योजना छ । अरू त खासै केही छैन । यातायातको सुविधा भयो भने गाउँतिर जाने योजना पनि छ । गाउँ गइएन भने काठमाडौंमा नै परिवारसँग रमाएर दसैँ मनाउँछु ।
बाहिरको कार्यक्रम थियो, त्यसलाई पछि सारियो । तर, चितवनका विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रम छ तिनै कार्यक्रममा सहभागी हुने योजना बनाएको छु । दसैँका लागि आफ्नै र घरपरिवारका लागि सपिङ गर्ने योजना पनि छ, तर गरिसकेको छैन । यसपालि दसँैंको टीका छैन । तर, भेटघाट
भने गर्छु ।
राजनराज सिवाकोटी, गायक
दसैँमा दोलखा घर जाने योजना छ । तर, कोरियाको कार्यक्रमको कुरा पनि आएको छ । तर, भइसकेको छैन । यदि कोरिया जाने भइन भने गाउँमा गएर त्यहाँका कार्यक्रममा सहभागी हुन्छु । साथै आफ्नो आमाबुवा, दाजुभाइसँगै दसैँमा रमाइलो गर्ने योजना छ ।
यसपालि दसैँमा बुटवल जाँदै छु । त्यसैले परिवारसँग रमाइलो गर्दै दसैँ मनाउने योजना छ । दसैँका धेरै कार्यक्रम आएका थिए । तर, मलाई दसैँमा कार्यक्रम गर्न मन लाग्दैन । त्यसैले दसैँमा परिवारसँगै रहन्छु र टीका थाप्न आफन्तहरूको जान्छु । मलाई दसैँको टीकाको दिन असाध्यै रमाइलो लाग्छ ।
माल्भिका सुब्बा, मोडल
यसपालि दसैँमा म काठमाडौंमै रहन्छु । त्यसैले खासै योजना छैन । परिवारसँग बसेर रमाइलोसँग दसैँ मनाउने योजना छ । विजयादशमीको दिन टीकाटालो गर्न र आशीर्वाद लिनका लागि आफन्तको घरमा जाने योजना छ । अरू त विशेष योजना छैन ।
नवीन के भट्टराई, गायक
यसपालि दसैँमा धेरै कार्यक्रम छ । काठमाडौं, बुटवललगायतका ठाउँमा प्रोगाम छ । दसैँभन्दा अघि एउटा एल्बम निकाल्दै छु । दसैँका लागि भनेर खासै योजना छैन । कार्यक्रममा सहभागी हुन्छु । त्यसैले नवमीको दिन मात्र घरमा रहन्छु र दशमीको दिन टीका थाप्न आफन्तकोमा जान्छु ।
by Mangal १९ मिनेट अघि
by Himal Darpan ७ घण्टा अघि